Maungtintyin: သင် ရပ်တည်မနေရတော့တဲ့ အခါ
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မိသားစုတစ်ခုမှာ- ပြီးတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သင့်ရဲ့လူ မဟုတ်သကဲ့သို့ ပြုမှုသည် အထိ သင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲ? အခြားတစ်ဖက်မှာ လူတိုင်းဟာ သင့်ရဲ့လူတွေကဲ့သို့ အခြားသူများနှင့် သင် ဘယ်လို ဆက်ဆံသင့်သလဲ?
သင်ဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးများကို ကြည့်ရှုတဲ့အခါ- သင် လုံလောက်သည်ထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်တယ်- ဆိုတာ စိတ်ချသေချာစေပါ။ ပြီးတော့ သင်ဟာ နက်နက်နဲနဲ လုံလုံလောက်လောက် ကြည့်ပြီးတဲ့ အခါ - အဲဒီမှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ယခု သူဟာ သင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လို သင် မုန်းနိုင်ပါ့မလဲ? အကြောင်းက သင် ရှုထုတ်လိုက်တဲ့ ထွက်သက်လေ တစ်ရှိုက်ဟာ အဲဒီသူ ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အရာ ဖြစ်သလို- အဲဒီသူ ရှုထုတ်လိုက်တဲ့ လေဟာ သင် ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ လေနဲ့မြေကို မျှဝေနေပါတယ်။ သင်ဟာ လူများကို အာကာသကို ဝေမျှနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာရာကို စည်းစနစ်တကျ မျှဝေတတ်ဖို့- သင်ဟာ သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာရှိဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ ဘာဆိုဘာမှ ရပ်တည်မနေတော့တဲ့အခါမှသာလျင် သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာ ကို သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့-Ego အပြီးသတ်ပျက်သုဉ်းခြင်းနှင့် မှားယွင်းတဲ့အတ္တရဲ့ အဆုံးသတ်နိဂုံးနဲ့အတူ သင့်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပင်ကိုယ် မူလဟာ ရှေ့ဆက်လက် တောက်ပ၀င်းပြောင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှ လူသား ဒါမှမဟုတ် တိရိစ္ဆာန် တစ်ခုခုနှင့်- နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရှိတဲ့ သွေးချင်းသားချင်း ဆက်ဆံရေး ရှိဖို့- သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အနေ အထား ဖြစ်လာပါတယ်။
အဆိုပါကာလ သင်ဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်ဖို့ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရမည် မဟုတ် ပါ။ အကြောင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ သင့်ထံမှ စတင်ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ သင့်ထံမှပဲ ချစ်ခြင်း မေတ္တာဟာ စိမ့်ဖြာလျှမ်ကျလာပါတယ်။ သင်ဟာ ချိုသာတဲ့စကားလုံးတွေကို ပြောဆိုဖို့အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ် နေရမည် မဟုတ်ပါ။ ချိုမြသာယာမှုဟာ အားထုတ်မှုပယောကမပါဘဲ သင့်အတွင်းမှ လားရောက်ပါတယ်။
အခြားသူများအတွက် ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် “သတိထားမိပြီး” သင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိတော့တဲ့အခါ- သင် ဘယ်ကိုပဲသွားသွား ပန်းများ ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။ ငှက်များက သီဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်မှုက အရိပ် ကဲ့သို့ သင့်နောက်က လိုက်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ သင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်- လူတိုင်းက သင်နှင့်အတူ ရှိချင်ကြပါလိမ့်မယ်- ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုမျိုးလတ်ဆတ်မှုကို သင်ဟာ ဖြန့်ကြက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီထိုးထွင်းအမြင်ကို သင့်ကို ပေးကမ်းတဲ့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲဆရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သင်ဟာ ဂုရုနှင့် shishya- အခေါ်ခံရဖို့ ထုံးတမ်းဓလေ့နောက် လိုက်ပါရမည့်မဟုတ်ပါ။ သင် လေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့ ဘယ်သူထံ မှဖြစ်ဖြစ်- သင့်ရဲ့ နေထိုင်နေတဲ့ ညဏ်ကွန့်မြူးမှု ဖြစ်လာတဲ့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်- သင် သိလိမ့်မယ်မဟုတ် ယင်တောင် - ဒါပေမယ့် အပြောင်းအလဲတော့ ရှိတယ်- ဆိုတာကို ပြောင်းလဲခြင်းများက ဖြည်းညင်းသာသာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးပြီ- ဆိုတာ ၀န်ခံဖို့ နောက်ဆုံးလူဟာ သင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သူတွေက သင်ဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပြီ- ဆိုတဲ့ သက်သေသာဓက အသွင်လက္ခဏာတွေ နဲ့ နေထိုင်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက သင်ဟာ တူညီတဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး- ဆိုတဲ့ သင်ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့အရာကို သင့်ကို မေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အပြောင်းအလဲတစ်ခုဟာ သင့်ဆီကလာတာ ဟုတ် မဟုတ်- ဆိုတာ သိဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်- ငါဒို့တတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်- လို့ သာမန်အားဖြင့် ဒို့တွေက ကိုယ်ရည်သွေး လေလုံးထွားသွားတာ -
ငါတို့တတွေဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာစိတ်ဝင်စားသူများ ဖြစ်တယ်- လို့ ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ငါတို့ မှန်ကန် ကြောင်း ထောက်ခံလျက် ငါတို့တတွေက ဆက်သွားတာ -
ငါတို့တတွေဟာ ကြီးမားလွန်ကဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိန်းအောင်းသူတွေ ဖြစ်တယ် - လို့ ငါတို့ကိုယ်ကိုယ် ငါတို့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်တာ- ဒါတွေက ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်မှာ အခိုင်အမာ အဆိုပြုမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖန်တီးထားမယ်- ဆိုတဲ့ အခါ- ဒါက တစ်စုံတစ်ခုဟာ မှားယွင်းတယ်- လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အခိုင်အမာ အဆိုပြုဖို့ အခြားအရာတွေ မလိုအပ်ပါ။
သင် အခိုင်အမာ အဆိုပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းက ဘာလဲ? သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာ ဖို့ ပြည့်ဝတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာရပါ့မယ်။ နောက်ပြီးတော့ သင်ဟာ လူတွေကို ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်း သတိမူခြင်းကို ရရှိဖို့ လူအများကို အမိဖမ်းဖို့ ကြိုးစားရမည်တော့ မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့် လူတွေက သင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အာရုံစိုက်မှုကို ရယူလိမ့်မယ် - ဖြစ်တဲ့ နေရာတစ်နေရာမှာ သင်ဟာ ရှိချင်ပါလိမ့်မယ်။ သတိပြုမိဖို့ မြင်မိဖို့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံရဖို့ သင်ဟာ ပါတီ အဖွဲ့အသိုက်များသို့ သွားပါတယ်။ အာရုံစိုက်ခြင်းခံရဖို့ဆိုတဲ့ ဒီဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုက- သင်ဟာ မပြည့်ဝသေးဘူး-ဆိုတာကို ပြသပါတယ်။ မပြည့်ဝသေးတဲ့သူဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြည့်စုံတဲ့ သွေးချင်းသားချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ချိန်လုံး နေထိုင်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။
သွေးချင်းသားချင်း ဆက်ဆံရေးဟာ သင်က သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ- ဘယ်သူထံကမှ တစ်စုံတစ်ခုကို တောင်းခံရယူဖို့ မကြိုးစားတော့တဲ့အခါ- သင်ဟာ အခြားသူများနှင့်တကွ သင့်ရဲ့ထိုးထွင်း သိမြင်မှုနဲ့ သင့်ရဲ့ ကျော်ကြားရေပန်းစားမှုကို ခွဲဝေပေးဖို့ အဲဒီနေရာမှာ ရှိတဲ့အခါ- သွေးချင်းသားချင်း ဆက်ဆံရေးဟာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်ဟာ သင်က မည်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုမဆို အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ ကွက်တိဖြစ်နိုင်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုမဆို အောင်မြင်မှုရဖို့- သင် လေ့လာသင်ကြားတဲ့နေ့ဟာ- ဆက်ဆံရေးအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင့်ချိတ်တဲ့- မြင့်မားတဲ့အဆင့်တစ်ခုအတွက်- ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခု ပြီးဆုံးပြီး ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရတဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆက်ဆံရေးမှာ ဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ် ကိုတောင် ကျော်လွန်သွားပါတယ်။
ဒါက အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ စံထားလောက်တဲ့ လူသားတစ်ယောက် သင် ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်အခါမှပါ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, January 23, 2012